Warbaahinta Muqdisho oo amar adag la dul dhigay. – SBC
Warbaahinta Muqdisho oo amar adag la dul dhigay.
Taliyaha Hay’ada Nabad Sugida Qaranka Jen . Cabdi Raxmaan Tuur yare oo maanta ka hadlay Munaasabad lagu qabtay Hotelka Jaziira oo lagu xusayay maalinta Saxaafada Aduunka ayaa amar kusoo rogay Warbaahinta Madaxa Banaan.
Tuur yare ayaa ku amray Warbaahinta ka howlgasha Magaalada Muqdisho in maanta waxii ka dambeeya aysan isticmaali Karin Magaca Xarakada Al-Shabaab taa badalkeedana Warbaahinta laga doonayo in ay Isticmaalaan Magaca UGUS Sida Uu Uu Sheegay.
Waxa uu tilmaamay in Warbaahinta aan qaadan amarkooda iticmaashana Magaca Al-Shabaab in ay u aqoonsan doonaan in ay kooxdaasi kamid yihiin, waxa uuna uga digay Warbaahinta Muqdisho isticmaalka Magaca Al-Shabaab.
Taliyaa Hay’ada Nabad Sugida Qaranka ayaa Xarakada Al-Shabaab ku tilmaamay Cudur ku dhaca Dhimirka, waxa uuna xusay in ay cudurkaasi talaalka ay u hayaan uu yahay in xabsi ku guraan waxii Shabaab ah sida uu hadalka u dhigay.